Xuquuqaha iyo masuuliyadaha (Barida Kala duwanaashaha Dhaqanka ee Qaxootiga) - CORENav
Sharciga Mareykanka: Xaquuqda Badelka Koowaad
Sharciyda dalka Maraykanka waxaa loogu talo galay inay difaacaan xuquuqda dhamaan dadka ayna kujiraan qaxootiga. Waa muhiim inaad leedahay aqoonta aasaasiga ah ee xuquuqdaada sharci iyo waajibaadkaaga markaad Maraykanka joogto.
Maadaama Maraykanka uu maamulo sharcigu, waxaa jira shuruuc badan oo qaxootiyada laga rabo inay bartaan. Waxaad masuul katahay inaad barato sharciyad aadna ogaato waxa kugu dhacaaya hadaad jabiso.
Markaad Maraykanka joogto, waa lagu ciqaabi karaa haddaad sharciga jabiso, xataa haddaadan aqoon sharciga aad jabisay. Ciqaabta qof uu kumutaysan karo danbigiisa waxay noqon kartaa in loo tarxiilo (loo celiyo) wadankaagii aad ka timidi. Sababtaan awgeed waa muhiim inaad barato aadna adeecdo sharciyada.
Waxaa jira sadex nooc sharciyo ah Maraykanka:
Sharciyada federalka, sida sharciyada kadhanka ah ka ganacsiga daroogada, waxuu qabanayaa qofkasta oo Maraykanka kunool.
Sharciyada maxaliga ah waxay quseeyaan magaalo ama degmo gaar ah. Kuwaan waxaa kamida sharciyada quseeya qaylada ama baakimida garigaaga.
Kahortaga Midab Takoorka
Sharciga Maraykanku wuxuu xarimayaa takoorka, inkastoo macluumaadka sharciyada kadhanka ah midab takoorka ay kala duwan yihiin gobal ilaa gobalka kale. Hadii laguu cunsuriyadeeyo ama laguu diido xaqaaga sababo laxariira asalkaaga, midabkaaga, diintaada, jinsigaaga, wadankaad kasoo jeedo, waxaad xaq uleedahay inaad raadiso tallaabo sharci.
Aan dembilahayn Ilaa Danbi Lagu cadeeyo
Hadii wax danbi ah lagugu eedeeyo Maraykanka, waxaa lagaaga fekeraa qof aan danbi lahayn ilaa danbi lagugu cadeeyo. Waxaad xaq uleedahay inaad hesho qareen, kaasoo kuwu matali doona maxkamada. Hadaan lacag uhayn qareen, maxkamada ayaa lacag siinaysa mid kumatala.
Heerkaaga Sharci iyo Muwaadinnimo
Sanadkaaga koobaad ee aad Maraykanka joogto, waxaad haysan doontaa sharci qaxootinimo. Inta waqtigaan lagu jiro waa inaad qaadatid nuqul kamid ah i-94 gaaga iyo kaar sawir leh oo dawladu soo saarto kaasoo aad sidaynayso markasta si aad u cadayso xasaanadaada sharci. Markaad haysato sharciga qaxootinimo, kama bixi kartid Maraykanka adoon fasax qaadan. Kuxafido dukumiintiyadaada asalka ah meel amaan ah.
Kaqaxooti ahaan, waxaad samayn kartaa kuwaan soosocda:
Waxaad usafri kartaa meel kasta Maraykanka dhexdiisa ah. (Xasuusnoow, haddaad guurto, waxaad lagaa rabaa inaad wargaliso Adeegyada Mudwaadinnimada iyo Socdaalka ee Maraykanka (USCIS) 10 maalmood gudahood kadib markaad kaguurtay gurigaaga.)
Waxaad gadan kartaa hanti.
Waad shaqayn kartaa.
Iskuul ayaad gali kartaa.
Waxaad udacwoon kartaa xaaskaaga iyo carruurtaada aan guursan ee kayar da’da 21 sano. Haddaad doonayso in xaaskaaga iyo caruurtaada ay kuugu yimaadaan Maraykanka, wakaalada dib udajinta ayaa kuusheegaysa waxaad samaynaysid.
Waxyaabaha aadan samayn karin intaad qaxootiga tahay:
Maqaadan kartid baasaboorka Maraykanka, ciidanka kuma biiri kartid, doorashada kama codayn kartid, ama kama shaqayn kartid shaqo dawladu bixiso oo ubaahan muwaadinnimada Maraykanka.
Uma safri kartid dibada Maraykanka adoon fasax kahaysan USCIS, wakaalada dawlada ee masuulka ka ah socdaalka.
Hadday qasab tahay inaad dibada aado, wakaaladaada dib udajinta ayaa kuusharxaysa sida loo codsado fasax.
Haddaad kunoqoto wadankaagii asalka ahaa adoo wali qaxooti ah, waxaa suuragal ah in laguu diido inaad kusoo noqoto Maraykanka.
Degaanshaha Rasmiga ah
Kadib markaad hal sano joogtid Maraykanka, waa inaad codsataa daganaanshaha sharciga ah ee joogtada ah (LPR), ama haystaha “Green Card”. La qabsiga heerka sharci waa mid aad muhiim u ah: sharciga ayaa kaadoonaaya, waana jidkii aad kuheli lahayd muwaadinnimada Maraykanka.
Wixii macluumaad dheeraada ah ee ku saabsan shuruudaha socdaalka, latasho wakaaladaada dib udajinta markaasna xubin kamid ah shaqalaha ayaa kucaawinaaya ama kuugudbinaaya qof kucaawin kara.
Kadib afar sano iyo sagaal billod oo aad ahayd qof si joogta ah udagaanaa Maraykanka, waxaad codsan kartaa muwaadinnimo. USCIS ama wakaaladaada dib udajinta ayaa kuusheegi kara waxaad u baahantahay inaad samayso si aad unoqoto muwaadin. Ayadoo ay lasocdaan waxyaabo kale, wa inaad lahaataa dabeecad mooraal wanaagsan leh aadna aqoon aasaasi ah uleedahay Ingiriisiga iyo taariikhda iyo dawlada Maraykanka. Soogalootiga ama qaxootiyaasha noqday muwaadiniinta xaq u leeyihiin inay lahaadaan xuquuqo la mid ah iyo mudnaan sida muwaadiniinta kudhashay Maraykanka.
Waajibaadka & Xuquuqda guud
Waa inaad barataa oodna taqaanaa shuruucda.
Qofkasta oo kunool Maraykanka wuxuu leeyahay xuquuqda aasaasiga ah ee madaniga ah, sida xoriyada hadalka, xoriyada cibaadada, iyo xoriyada kulananda nanabada ah.
Waad kashaqayn kartaa Marakanka.
Muwaadiniintu waxay kacodaynkaraan doorashooyinka.
Cunsuriyaynta shaqada waa xaraan Maraykanka. Qofka shaqo kuuguma diidi karo sabab laxariirta asalkaaga, midabkaaga, diintaada,jinsigaaga, iyo wadanka aad udhalatay.
Adeegyada dadwaynaha iyo faa’iidooyinka waxaa heli kara cidii uqalanta.
Hadaad jabiso sharciga, sharcigaaga socdaalka saamayn ayay arintaasi kuyeelanaysaa.
Waxaad uguuri kartaa bulsho cusub.
Haddaad guri cusub uguurto, waa inaad buuxisaa foomka USCIS ee badalida ciwaanka.
Raga udhaxeeya da’da 18 iyo 25 waa inay iska qoraan Adeegga Xulashada.
Waa inaad bixisaa canshuurta dakhligaaga. Waa inaad buuxisa aadna saxiixdaa foomka canshuurta dakhliga aadna udirtaa dawlada sanad kasta. Foomka adiga ayaa buuxin kara ama qof ayaad caawimaad waydiinsan kartaa inuu ku caawiyo.
Waa inaad haysataa liisanka iyo caymiska si aad gaari uwadato.
Dadka Maraykanka kunool mana cabi karaan ama ma gadan karaan alkolo ilaa ay kagaaraan da’da 21 sano.
Waalidku waa inay bartaan sifooyinka sharciga ah ee ay ku edbinayaan caruurtooda.
Waa xaaraan inaad caruurta katagto ayadoon cidna lajoogin.